အိုဆာကာအတွက်သလားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › အိုဆာကာအတွက်သလားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ
အိုဆာကာအတွက်သလားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ
1. က Universal Studios
ဦးအရာငါကUniversal Studios ကတစ်ဦးအလည်အပတ်ရန်မပြောပါဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ စီး, ဂိမ်းများ, အခြေတည်အစုံနှင့်စျေးဆိုင်, အပြန်အလှန်ပြပွဲနှင့် 4D အတွေ့အကြုံများ; အခြေခံအားဖြင့်ကြီးစွာသောမိသားစုသည်နေ့ရက်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်။ အဘယ်အရာကိုအိုဆာကာမှမဆိုခရီးစဉ်က Universal Studios ကဂျပန်မရှိမဖြစ်စေသည်ထိုကဲ့သို့သော Evangelion, Godzilla, Titan အပေါ်တိုက်ခိုက်, စုံထောက် Conan နှင့် Monster Hunter အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားဖျော်ဖြေရေးအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်အခြေခံပြီးက Universal ကိုခေါ်သစ်ကိုဆွဲဆောင်မှုဂျပန် 2017 Cool ဖြစ်ပါသည်, အသစ်အတှေ့အကွုံမြားသငျသညျထားမည်မှရင်ဆိုင်ရ အနုပညာနည်းပညာ၏ပြည်နယ်ကို အသုံးပြု. သည်ဤအထင်ကရဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သငျသညျတော့ဘူးမကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်အဖြစ်အသစ်တစ်ခုဟယ်ရီပေါ်တာအပိုင်းကိုလည်းနည်းတူကောင်းစွာမှော်ပရိတ်သတ်များအဘို့အဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ငါအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးနေ့ကအကြံပြုလိမ့်မယ်။
2. Aqua ဘတ်စ်ကား Aqua ‘၏လမ်းမများပေါ်တွင်မျောနေဖြင့်အိုဆာကာကိုကြည့်ပါနှင့်မြစ်ထဲကနေအဓိကအပန်းဖြေအစက်အပြောက်တွေ့မြင်ကိုယူပါ။
ကှနျ့အပေါ်တစ်ဦးစီးနင်ကို’ရေ Metropolis’ အဆိုပါ Aqua ကှနျ့သင်န်းကျင်ရှုခင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးလည်းအိုဆာကာမြစ်တံတားအောက်မှာရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောပြတင်းပေါက်နှင့်အတူလှေတညျဆောကျတဲ့အထူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပျော်စီးနေ့တိုင်း 1.5 နာရီနှင့်ပြေးဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ သငျသညျနေ့လယ်စာ, နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ညစာများအတွက်ခရီးစဉ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်အရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်အောင်ကိုလည်းသင်ကသူတို့စားသောက်ဆိုင်ရုဇ်အပေါ်အချိန်စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
Tsutenkaku မျှော်စင်သို့အလည်တစ်ခေါက်အိုဆာကာမြို့၏သင်္ကေတအဖြစ်လူသိများသည်,ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်မဆိုအိုဆာကာခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ ထိပ်မှာ, သင်က၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ဒီဇိုင်း Eiffel မျှော်စင်နှင့် Arc de အောင်မြင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးမည်သို့ကဲ့သို့မြို့နှင့်ရဲတိုက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်, သင်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်တက်ရောက်ရန်လိုအံ့သောငှါဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအကွာအဝေးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာရဲတိုက်၏အခြေစိုက်စခန်းမှာအကောင်းတစ်ဦးကံကောင်းပါစေဘုရား Billiken, Glico အစားအစာဆိုင်နှင့်၎င်း၏ပြဇာတ်ရုံ၏ရုပ်တုအဆိုပါလေ့လာရေးကုန်းပတ်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
4. အိုဆာကာ Aquarium Kaiyukan
ဒီဆွဲဆောင်မှုဒီငါးမွေးကန်ငါး, နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်သမုဒ္ဒရာကနေအခြားရေအောက်သတ္တဝါများအသက်တာ၏အလွန်ကြီးမားတဲ့စစ်ခင်းကျင်းအိမ်ရှင်အဖြစ်အဖြစ်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာအကျော်ကြားဆုံးနေထိုင်သူတစ်ဦးဝေလငါးငါးမန်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာငါးမန်းများ၏အကြီးမားဆုံးအမျိုးအစားပါ! သာအနည်းငယ်သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောငါးပြတိုက်အတွက်အသက်ရှင်သည်အတိုင်းတဦးတည်းကိုမြင်လျှင်, ရှားပါးမျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤကြီးမားသောကောင်လေးငါးမန်းများနှင့် stingrays နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းစွာရေကူးတွေ့မြင်အဖြစ်အဆောက်အဦး၏အနိမ့် level မှာတစ်ဦးလက်ပေါ်ရော့ခ်ရေကူးကန်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
အိမ်ရာနှင့်အိုဆာကာမြို့၏အိုဆာကာပြတိုက်အလွန်ဟောင်းသမိုင်းရှိပါတယ်,သင်ကအိမ်ရာနှင့်နေထိုင်မှု၏အိုဆာကာပြတိုက်မှာဘဝမှလာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကအဲဒိုကာလများတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုမြို့တစ်ဦးကမော်ဒယ်, display ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သင်တို့ကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုငျကွောငျး recreated အဆောက်အဦးများနှင့်လမ်းများ။ အပြန်အလှန် display တွေအိုဆာကာရဲ့သမိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုတစျဆငျ့သငျသညျသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ဤမြို့ကိုကြောင့်ယနေ့ကဲ့သို့လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သင်ဒီမှာနေတဲ့အချိန်စက်မလိုအပ်ပါဘူး။
6. Momofuku Ando Instant Ramen
ခေါက်ဆွဲပြတိုက်လက်ငင်းခေါက်ဆွဲ- ဂျပန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးကအကြိုက်ဆုံးဟင်း။ သင်တို့မူကား, ခေါက်ဆွဲခြောက်ဂျပန်ထံမှလာသည်ဟုသိကျွမ်းခဲ့တာလဲ သငျသညျသုံးဆယ်ခေါက်ဆွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရသာသို့မဟုတ်ဂျပန်တွင်ရရှိနိုင်ဂျပန်ခေါက်ဆွဲခြောက်ကျော်ရှိပါတယ်သိကြသလား? သင်ဤပြတိုက်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်လေ့လာသင်ယူနှင့်ထို့ထက် ပို. အရေးကြီးသည်မှာမြည်းစမ်း, ချက်ချင်းခေါက်ဆွဲများ၏သမိုင်းနိုငျပါသညျ!
အဆိုပါအိုဆာကာ Shochikuza ပြဇာတ်ရုံမှာ Kabuki Show ကိုကြည့်ရှုပါ 7
Kabukiရိုးရာမျက်နှာဖုံးများနှင့်ဝတ်စုံပါဝင်သောပြဇာတ်ရုံတစ်ရိုးရာဂျပန်စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော aragoto စတိုင်သို့မဟုတ် actioned ထုပ်ပိုးကစားသို့မဟုတ် wagoto စတိုင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရင်ခုန်စရာရေးရာကစားသကဲ့သို့, Shochikuza ပြဇာတ်ရုံမှာပြသကြည့်ဖို့ဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအချိန်-ဂုဏ်ပြုဂျပန်စတိုင်ကခုန်နှင့်ဂီတရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်လက်လွတ်မနိုငျပြပွဲပါ!
8. Chihaya-akasaka-mura ကျေးရွာသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်နေ့ခရီးစဉ်ကို ယူ.
သင်တစ်ဦးအားလပ်ချိန်မှာတစ်ရက်ရှိသည်နှင့်အိုဆာကာပတ်လည်ရှိတောင်များကိုတွေ့မြင်လိုပါကလာရောက်လည်ပတ် Chihaya-akasaka-mura ကျေးရွာတစ်ခုတောက်ပစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Konogozan တောင်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, ဒီရွာကဂပြနျစပါးလယ်ကွင်းများနှင့်ကျေးလက်၏ဂုဏ်အသရေကိုမြင်ရပါစေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာသင်ဒီမှာလုပျနိုငျတဲ့တွေအများကြီးဒေသခံရောက်ရေချိုငါးဘို့ငါးဖမ်း, တောင်ပေါ်သို့တက်တောင်တက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးရွာစျေးကွက်ရှာဖွေစူးစမ်း, ထွန်းလင်းနှင့် Shimo-Akasaka Castle အပျက်အယွင်း။
ထိုကဲ့သို့သော planetarium အဖြစ်အသစ်သောဆွဲဆောင်မှုအတူအိုဆာကာသိပ္ပံပြတိုက်,အအိုဆာကာသိပ္ပံပြတိုက်အာကာသသို့မဟုတ်စွမ်းအင်ကိုစိတ်ဝင်စားသောသူမည်သူမဆိုအဘို့ကြီးစွာသောအလည်အပတ်ခရီးဖြစ်လိမ့်မည်! သင်သည်သင်၏အာရုံနှင့်အတူသိပ္ပံလေ့လာစူးစမ်းအဖြစ်လက်ကမ်းပြပွဲသငျ့စိတျထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ ဒါကပြတိုက်က၎င်း၏အသစ်အ planetarium အပိုင်းအတွက်၎င်း၏မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်စနစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အထူးပြုလုပ်အမိုးခုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ 28000 ကျော်ကြယ် intergalactic အလောင်းတွေပြသနိုင်မဝါကြွား။ အကြည့်သရုပ်ဆောင်ဖို့ဘာတစ်လမ်း!
အိုဆာကာလုပ်ဖို့အိုဆာကာအရာလုပ်ဖို့အရာတစျခုတည်နေရာအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောစစ်မှန်ဂျပန်အတွေ့အကြုံများကိုပေါင်းစပ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကခရီးသွားဧည့်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးပါ!သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစက္ကူခေါက်ခြင်း, ပန်းပွင့်စီစဉ်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအဖြစ်ပိုပြီးရိုးရာဂျပန်လှုပ်ရှားမှုများသင်ယူဖို့ယူနိုင်သောအတန်းနေသောအိုဆာကာ Studios က, Maiko Caféနှင့်စိတ်အိုဆာကာယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံများလုပ်ဖို့အရာအပါအဝင်ကဏ္ဍများနှင့်အတူ။ ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုများအများစုလက်ပေါ်မှာအဖြစ်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တပြင်လုံးကိုမိသားစုများအတွက်တစ်ခုခုကဒီမှာရှိတယ်ပါ! သည်အခြားခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုမတူဘဲ, အိုဆာကာလုပ်ဖို့အရာအခန်းပေါင်း setting တစ်ကြိုဆိုပွဲရိုးရာအိမ်မှာန်ထမ်းစကားပြောဖော်ရွေအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူအိမ်မှာသင်မှန်ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
အိုဆာကာလာရောက်လည်ပတ်နေချိန်မှာသင်မပျက်မကွက်မပေးနိုင်မျက်မှောက်, သင့်ပြီးပြည့်စုံသောခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့ Shinsaibashi အတွက်လုပ်ဖို့ Dotonbori နှင့်အရာအတွက်လုပ်ဖို့အရာနှင့်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားစာရင်းထွက်များစစ်ဆေး!
MaikoyaUSJအိုဆာကာtsutenkaku မျှော်စင်Maiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်Chihaya Akasakamura ကျေးရွာMomofuku Ando Instant Ramen ခေါက်ဆွဲပြတိုက်အိုဆာကာသိပ္ပံပြတိုက်အိုဆာကာ Shochikuza ပြဇာတ်ရုံUniversal Studios ကဂျပန်